cable Manager ကို
LSA ခရိုဏာ Module
networking Tool ကို
Crimping Tools များ
optic Fiber Tools များ
Tools များ Down ကိုထိုးကြိတ်
Stripper Tools များ
Networking Tool ကိုပစ္စည်းများ
patch Panel ကို
CAT5E Patch Panel ကို
CAT6A Patch Panel ကို
CAT7 Patch Panel ကို
1-ဆိပ်ကမ်းက Surface တောင်ပေါ်ကသေတ္တာ
2-ဆိပ်ကမ်းက Surface တောင်ပေါ်ကသေတ္တာ
4-ဆိပ်ကမ်းက Surface တောင်ပေါ်ကသေတ္တာ
6-ဆိပ်ကမ်းက Surface တောင်ပေါ်ကသေတ္တာ
CAT5E Surface ကတောင်ပေါ်မှာသေတ္တာ
CAT6 Surface ကတောင်ပေါ်မှာသေတ္တာ
CAT6A Surface ကတောင်ပေါ်မှာသေတ္တာ
cabling ဖြေရှင်းချက်များအတွက် 8p8c, 6p6c, 6p6c, 4p4c crimper, Stripper tool ကို
19-03-19 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
Uniconm 2019 နွေဦးရာသီပွဲတော်အားလပ်ရက်သတိပြုပါ
19-02-14 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ကျနော်တို့ 2019 ခုနှစ်, အစဉ်မပြတ်အဖြစ်, လက်ဖြင့်သင်တို့နှင့်အတူရှိတာဝန်သိနှင့်ချက်လက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်ယုံကြည်မှုဎ 2018. အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အစဉ်အလာဖြစ်တယ်, တရုတ်ကနွေဦးရာသီပွဲတော်အားလပ်ရက် 14 မှ 31 ဇန်နဝါရီအကြားကျရောက်သည့်အတိုင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုသည်ဖေဖော်ဝါရီလ 2019. က 29-32 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်းသစ်ကို orde ပိုပြီးကြာ ...
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ် CAT5E / CAT6 အဓိကကြောကျတုံး jack နဲ့ patch ကို panel ကိုအဆုံးသတ်ခြင်းနှင့် install လုပ်ဖို့, သင်ကအာမခံတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောကွန်ရက်ကပါစေ။
18-11-19 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
Cat5e / Cat6 အဓိကကြောကျတုံးဂျက် / ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ် patch ကို panel ကိုအဆုံးသတ်ခြင်းနှင့် Install လုပ်ဖို့, သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကွန်ရက်ကသေချာစေရန်လုပ်တိုင်းကွန်နက်ရှင်အချို့ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ သငျသညျမှနျရပ်စဲနည်းလမ်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမိတ်ဆက်မီ, အဓိကကြောကျတုံးဂျက်အကြောင်းကိုအချို့သောအခြေခံအသိပညာရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ်ရှိသည်ဖို့ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်ကောင်အီလက်ထရောနစ်ကုန်စည်ပြပွဲ (ဆောင်းဦးရာသီ Edition ကို) ဝယ်လက်ရောနှောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာရှိရာထူးခြားသောပလက်ဖောင်းခဲ့
18-11-07 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
Ningbo Uniconm အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှ 2018 ခုနှစ်ဟောင်ကောင်အီလက်ထရောနစ်ကုန်စည်ပြပွဲ (ဆောင်းဦးရာသီ Edition ကို) တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ဟုဌာနခွဲဖြစ်လိမ့်မည် (ကျွန်ုပ်တို့၏တဲသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်ဖြန့်ချိခံရဖို့အသစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်စံနမူနာအရေအတွက်, ကြိုဆိုဝယ်ယူ, ဝယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရွယ်တူဖွစျလိမျ့မညျ အမှတ်တဲ) 5E-G08 ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ site ကိုအလိုတော် ...
Rongjiang စက်မှုဇုန်, မှကျင်းရှန်မြို့, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo, 315191, တရုတ်